यो रुखलाई ११८ वर्षदेखि अपराधीलाई झैं किन बाँधेर राखियो ? रहस्य बुझ्नुस – Sanchar Patrika
यो रुखलाई ११८ वर्षदेखि अपराधीलाई झैं किन बाँधेर राखियो ? रहस्य बुझ्नुस
October 1, 2020 120
काठमाडौं, – अपराध गरेको सजायमा मानिसलाई समातेर वा बाँधेर राखेको त तपाईँ हामीले देखेका छौँ । तर रुखलाई समेत बाँधेर राखेको भने पक्कै देखेका छैनौं । रुखलाई फलामको सिक्रीले अपराधीलाई झै बाँधेर राखेको हेर्न अन्त कतै जानु पर्दैन पाकिस्तान गए पुग्छ । जहाँ सन १८९८ देखि एउटा रुख फलामको सिक्रीमा बाँधिएर बसेको छ ।
पाकिस्तानको कोटल आर्मीमा भएको यस रुखलाई बाँधेर राख्नुको पछाडि रमाईलो घटना लुकेको छ । पाकिस्तानी अखवार डनका अनुसार ब्रिटिस शासन भएको समयमा एक दिन ब्रिटिस अफिसर जेम्स स्केल्ड त्यो स्थान वरिपरि घुमिरहेका थिए ।
त्यतिकैमा उनलाई त्यो रुखले आफूलाई पछ्याइरहेको जस्तो लाग्यो, कारण जेम्सले मदिरा सेवन गरेका थिए । उनले तुरुन्तै डराएर आफ्ना सैनिकहरुलाई बोलाएर रुखलाई गिरफ्तार गर्न आदेश दिए । उनको आदेश लगत्तै सैनिकहरुले त्यस रुखलाई फलामको सिक्रीले बाँधेर राखे ।
हाल यो पर्यटकीय स्थलमा पर्दछ । अंगे्रज शासकहरु कति क्रुर थिए भन्ने दृष्टान्त देखाउनका लागि यो रुखको सिक्री अहिलेसम्म पनि ननिकालिएको बुझिन आएको छ ।
Prevआज धेरै सस्तो भयो सुनको मुल्य(हेर्नुहोस कति पुग्यो)
Nextवडा दशैं पर्वमा शक्तिपीठमा भीडभाडका क्रियाकलाप र बोकाबलि चढाउन निषेध